အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Phoenix06 - ဝီကီပီးဒီးယား
၃ Zawgyi - Unicode 5.1 Conversion
၄ How to redirect
၅ Invitation for the Medical Translation Project
၆ Medical Translation Newsletter Aug./Sept. 2014
၆.၁ Feature – Ebola articles
မြန်မာဝီကီပိဒိယ က ကြိုဆိုပါတယ်။ ကူညီပံ့ပိုးပေးမယ့်သူတွေ နည်းပါးနေတဲ့ အတွက် မြန်မာဝီကီကို တတပ်တအား အကူအညီပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အခက်အခဲများရှိရင် ကျွန်တော့်ရဲ့ အသုံးပြုသူစာမျက်နှာ မှာ မက်ဆေ့ ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ --Zawthet ၀၅:၀၅၊ ၂၂ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
မြန်မာစစ်တုရင် ဖက်လို့ကောင်းသဗျာ။ Okisan ၀၉:၁၇၊ ၂၂ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
မြန်မာလိုတော့ မပြန်ရသေးဘူး။ ဒီမှာ ကြည့်ပါ။  --Zawthet ၀၅:၅၁၊ ၂၆ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
Zawgyi - Unicode 5.1 Conversionပြင်ဆင်
You can use the Kanaung to convert the text type in Zawgyi to Unicode 5.1 or vice-visa. You can download it from here.  --Zawthet ၁၀:၀၀၊ ၂၈ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၀၈ (UTC)
How to redirectပြင်ဆင်
အကြောင်းအရာတူတစ်ခုတည်းကို ခေါင်းစဉ်နှစ်မျိုးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျား။ ဥပမာ- ဓမ္မစင်္ကြာ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးထားတယ်ဗျာ၊ အဲဒါကို 'ဓမ္မစက္ကပဝတ္တန သုတ္တံ' သို့မဟုတ် 'dhammacakkapavattana sutta' လို့ရှာရင်လဲ ဓမ္မစင်္ကြာ ကိုပဲ ရောက်စေချင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ။
'ဓမ္မစက္ကပဝတ္တန သုတ္တံ' ဆိုတဲ့ စာမျက်နှာ အသစ် နဲ့ 'dhammacakkapavattana sutta' စာမျက်နှာ အသစ် ဖန်တီး လိုက်ပါ။ ပြီးရင် #REDIRECT [[ဓမ္မစင်္ကြာ]] ဆိုပြီးတော့ အဲဒီစာမျက်နှာတွေမှာ ထည့်ထားလိုက်ပါ။ အဲဒါဆိုရင် ဘယ်ခေါင်းစဥ်နဲ့ရှာရှာ ဓမ္မစင်္ကြာ ကိုညွှန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ --Zawthet ၁၅:၃၇၊ ၈ ဒီ​ဇင်​ဘာ​ ၂၀၀၉ (UTC)
Invitation for the Medical Translation Projectပြင်ဆင်
ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၃:၁၀၊ ၂၄ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၁၄ (UTC)
Medical Translation Newsletter Aug./Sept. 2014ပြင်ဆင်
Feature – Ebola articlesပြင်ဆင်
-- ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၃:၁၀၊ ၂၄ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၁၄ (UTC)
အင်္ဂလိပ်ဝီကီမှာ ကျွန်တော့်ယူဇာနိမ်း ပြဿနာ နည်းနည်းရှိလို့ ဝင်လို့မရဘူး။ ပြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားလိုက်ဦးမယ်။
Phoenix06 (talk) ၁၈:၃၀၊ ၂၄ အောက်​တို​ဘာ​ ၂၀၁၄ (UTC)
မင်္ဂလာပါ။တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။(တကယ်ပါ။) အရေးတော့မကြီးပါဘူး။ကိစ္စက ဒီလိုပါ။အင်္ဂလိပ်ဝီကီမှာ ပေ့ချ်တခုအဖျက်ခံရတော့မယ်ဆိုလို့ပါ။အဲ့ပေ့ချ်ကို စာအုပ်တအုပ်ထဲကနေ ကျမကူးတင်ထားတာပါ။အဖျက်မခံရစေချင်ပါဘူး။ အဲ့ဒါလာကြည့်ပြီး ပေ့ချ်ကို ဖျက်သင့်မဖျက်သင့်မှတ်ချက်လာရေးပေးပါလို့ အကူအညီတောင်းတာပါ။ကူညီပါနော်။ဟိုလေ ဖျက်သင့်တယ်ထင်ရင်လည်း ဖျက်သင့်တယ်။ မဖျက်သင့်ဘူးထင်ရင်လည်း မဖျက်သင့်ဘူး ပေါ့နော်။လောလောဆယ် လာတော့ကြည့်ပေးပါ။ pageနာမည်က Pyu Readerပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Yin May Lwin (talk) ၁၇:၄၄၊ ၁၄ မေ​ ၂၀၁၅ (UTC)
မြန်မာပြည်စစ်တုရင်ချန်ပီယံများ အစား အမျိုးသားတံခွန်စိုက် စစ်တုရင် ပြိုင်ပွဲ လို့ Title Name လေး ပြောင်းပေးနိုင်မလားခင်ဗျ။ နိုင်ငံတော်က ကျင်းပတဲ့ စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲအမည်က အမျိုးသားတံခွန်စိုက် စစ်တုရင် ပြိုင်ပွဲ လို့ပဲ သုံးပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ — NCAMyanmar (ဆွေးနွေး • ပံ့ပိုး) ၏ လက်မှတ်မရေးထိုးထားသော ဆွေးနွေးချက်။ 09:03,4November 2020
ဒီဆွေးနွေးချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာ ဆီကို ရွှေ့ပေးထားပါတယ်။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၉:၅၂၊ ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ_ဆွေးနွေးချက်:Phoenix06&oldid=558131" မှ ရယူရန်
၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၉:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။